Waa kuma Ergeyga dhex-dhexaadinaya khilaafka Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
17 June 2021 Kaalinta Nabadoon Xaad dhalinyarada loo diray Eritrea
ADDIS ABABA - Midowga Afrika ayaa Ergeyga gaar ah usoo magacawday inuu dhex-dhexaadiyo khilaafka u dhaxeeya Madaxda Soomaaliye ee ku qotoma arrimaha doorashadda.
Moussa Faki Mahamat, oo ah gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay xalay magacaabista John Dramani Mahama oo Midowga Afrika u qaabilsanaan doona ka shaqeynta xalinta khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya.
John Dramani Mahama wuxuu soo noqday Madaxweynaha dalka Ghana 2012 illaa 2017, wuxuuna markii uu xilka ka degay kasoo shaqeeyay Midowga Afrika isagoo soo dhex-dhexaadiyay khilaafkii ka dhashay doorashadii Gambia 2016 oo ay ku murmeen Yahya Jammeh oo laga guuleystay iyo Adam Barrow oo la doortay.
Waxaa la filayaa in Ergeyga Midowga Afrika yimaado magaaladda Muqdisho maalmaha soo aadan, kahor inta uusan furmin Wadahadalka doorashadda ee Rooble iyo Madaxda Maamul Goboleedyada dalka oo lagu ballansan yahay 20-ka bishan.
Moussa Faki ayaa ugu baaqayaa saamileyda siyaasadda Soomaaliya inay si daacadnimo leh uga wada xaajoodaan muranka taagan, oo ay kahor mariyaan danaha Soomaaliya midda gaarka ah iyo ka shaqeeyaan heshiis loo dhan yahay oo lagu xalliyo xiisadda doorashada.
AMISOM ayaa sugi doonto amaanka Ergeyga, iyadoo laga codsaday Wakiiladda Beesha Caalamka inay garab istaagaan, kuna taageeraan wax kasta oo fududeyn kara in si degdeg ah lagu sameeyo ismari-waagga.
Dowladda Soomaaliya wali kama aysan hadlin Ergeyga dalka loo soo dirayo, waxaana la ogeyn inuu ku guuleysan karo xalinta khilaafka taagan oo meel sare gaarey mudadii uu Farmaajo gacanta ku hayay arrimaha doorashooyinka.
Qatar ayaa kasoo hormartay Midowga Afrika oo Ergey usoo dirtay Todobaadkii hore, kaasoo mudo afar maalin ku sugnaa Caasimadda, isagoo la kulmay Madaxda dowladda ugu sareeya, saddex maamul Goboleed iyo Musharixiinta Mucaaradka.